Qorshaha Masterka Gaadiidka Izmir 2030 ayaa lagu dhawaaqay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirQorshaha Gaadiidka Gaadiidka ee Izmir 2030 Lagu dhawaaqay
Qorshaha Gaadiidka Gaadiidka ee Izmir 2030 Lagu dhawaaqay
10 / 01 / 2018 35 Izmir, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Qorshaha Gaadiidka Gaadiidka ah ee İzmir, oo ay bilaabeen Dawlada Hoose ee İzmir ee bishii August ee 2015, ayaa la dhameeyay. Qorshaha, oo lagu qabtay koox farsamo oo ballaaran oo ay gacanta ku hayaan lataliyaha waxbarasho ee 10 ee khibrad caalami ah, ayaa go'aamiyey khariidadda waddada ee ay ku socon doonto illaa 2030.
Sida laga soo xigtay qorshaha lagu faahfaahiyay dadweynaha shirweynaha magaalada Mayor Aziz Kocaoğlu, waxaa la filayaa in la kordhiyo isku xirka nidaamka tareenka ee magaalada si loo kordhiyo 15 km oo sanadka 465 ee xiga. Habkaas oo kale, xarun cusub oo lagu wareejinayo ayaa lagu dhigi doonaa dhibicda 27.
Qiimeynta qorshaha iyo bartilmaameedyada cusub, Madaxweyne Aziz Kocaoğlu ayaa farriin muhiim ah ka bixiyay kulanka:
Bakanlık Wasaaradda Gaadiidka ayaa fulisay maalgelinta nidaamka tareennada ee magaalooyinka qaarkood. 7-8 waxay yiraahdeen waxay dhisi doonaan xarun Halkapınar-Isotaş sanado badan. Waxaan awood u leenahay inaan taas sameyno haddii loo baahdo. "
"Inkasta oo tareennada magaalooyinka iyo dhismooyinka tareennada ee magaalooyinka kale ay dhiseen dawladda dhexe, waxaannu dubannay saliiddeenna waxaannu kordhinnay tareenka 11 km ee 170 km, xitaa taageeraya awoodda iyo saxeexa. "
Qorshaha Mashruuca Gaadiidka ee İzmir wuxuu diyaariyey inuu u diyaargaroobo sanadka 2030 ee İzmir iyo in uu daboolo baahiyaha gaadiidka ee magaalada taas oo ku dhow qiyaastii 6 dadku ku noolaan doonaan. Go'aanka, oo ay ku jiraan maalgelin muhiim ah oo qaabeyn doona mustaqbalka İzmir, ayaa lala wadaagay dadweynaha. Qorshaha kama dambaysta ah ee Qorshaha Gaadiidka Gaadiidka ah ee İzmir, oo ah qorshaha ugu mashquulsan ee ka mid ah kuwa la ogaaday ilaa hadda, ayaa si faahfaahsan loogu sharaxay shirkii ay ka soo qaybgaleen Mayor Mayor Aziz Kocaoğlu.
Waxaanu daboolnay in ka badan nuskii
Duqa magaalada caasimadda ah ee magaalada İzmir Aziz Kocaoğlu ayaa sheegay in mid ka mid ah ujeedooyinka ugu muhiimsan ee qorshaha ay tahay in la qaado talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee kor u qaadidda lahaanshaha gawaarida wuxuuna yiri:
"Degmada Caasimadda ee Magaalada İzmir waxay sii wadaa doonitaankeeda ay ku maareyn karto magaalada iyada oo maskaxda iyo sayniska ay tahay hage. Qorshahan mihnadeed ee gaadiidka ayaa sidoo kale la ogaaday dhammaadkii daraasaddan oo kale. Waxaan hadda ku shaqeyneynaa shabakadda nidaamka tareenada 2009 km sida 11 km sida ku xusan Qorshaha 165. 1 wuxuu noqon doonaa xNUMX km kaddib markii Tramway-ka uu ku shaqeynayo. Saddex-meelood oo ka mid ah isku-xirka xadiidka 180 ee loo qorsheeyey qorshaha istiraatijiyadeed ee cusub ayaa si fudud loo gudbinayaa. Si kale haddii loo dhigo, degmooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ayaa daboolay in ka badan kala badh wadada. "
Haddii Wasaaraddu aanay haysan, waanu
Mayor Mayor Aziz Kocooglu ayaa sheegay, in ka duwan magaalooyinka waawayn, maalgashiga nidaamka tareenka ee ku yaal İzmir waxaa lagu sameeyey xarumo dawladeed oo maxalli ah oo sidan soo socda:
Wasaarada Gaadiidka ayaa sanadihii ugu dambeeyay, Wasaaradda Gaadiidku waxay maalgelin ku samaysay nidaam tareen oo magaalooyinka qaarkood. Waxaa jiray dalab noocan oo kale ah. Marka la eego baahida, waxaan soo jeedinnay khadadka Halkapınar-Isotaş iyo Buca iyaga oo diiradda saaraya laba mashruuc. 7-8 waxay yiraahdeen waxay dhisi doonaan xarun Halkapınar-Isotaş sanado badan. Markaasuu yimid, oo intuu tegey ayuu tegey oo jiifsaday. Ma jiraan wax macluumaad ah. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaanu si farxad leh u ogaan doonnaa xaruntaan 4,5 km xarunteeda. Waxaan isku xireynaa nidaamka tareenka ee Jaamacadda Katip Jelebi, Jaamacadda Dokuz Eylul Narlıdere Campus iyo Tinaztepe Campus. Waxaan ku xirnay garoonka diyaaradaha ee Izban. Waxaa jira hal kaliya oo Isotas ah. Waxaan horay u qabanay mashruuca, oo loo dhiibay wasaaradda. Waxaan awood u leenahay inaan taas sameyno haddii loo baahdo. "
Waxaan raadineynaa ansixinta Mavishir Pier
Mucaaradka Aziz Kocooglu ayaa sheegay in ay doonayaan in ay qaadaan tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan gaadiidka badda si ay u dhistaan: Meelaha aan u diyaargarayno aagga waxaanu abaabulnaa munaasabadda Mustafa Kemal Sahil Boulevard. Xeebta Mavişehir waa mid noo suurtagelisa inaanu ku dhufanno gaadiidka badda. Goobta xarkaha ayaa ah mid cad. Qorshayaasha ayaa la soo gudbiyay. Isla markiiba ka dib markii qorshooyinka la ansixiyay, oo sugayay wakhti dheer, si dhakhso ah ayaa loo samayn doonaa, isla markaasna abuuri doonta awood wayn oo gaadiidka gaas. Waxaan ka fileynaa Wasaaradda Deegaanka. "
Ma qorsheyneyno wadnaha qofka.
Ka dib markii geedi socodka ka qaybqaadashada dhammaan mashaariicda ay ku darsameen ajandaha, sidaas darteedna ay qaadeen muwaadiniinta Duqa magaaladda Kocaoglu, mashruuca ku-meel-gaadhka ah ee Gacanka kuma jirto qorshaha, dhaleeceynta ayaa lagu jawaabay: "Madaxwaynaha ayaa sheegay inuusan ka soo horjeedin qorshaha guud" ayuu yiri. Marka la weydiiyo sida ay tahay, waa in aan ka warbixinnaa arrimaha ay dawlada dhexe rabto in ay sameyso iyo in ay sheegto 'waan diidi doonaa' sida waafaqsan daraasaddooda sayniska. Laakiin haddii dawlada dhexe ay ku adkaysato maalgashiga, haddii aysan jirin wax muhiim ah, ma jiraan waxyeelo weyn oo mustaqbalka magaalada ah, wax ka soo horjeeda. Isku day in aad u jiido habka mashruuca waa hal shay. Kani waa degmada weyn ee magaalada ganacsigeeda la xiriirta wadaxaajoodka. Laakiin haddii aqoonyahanka ku jira Qorshaha Mashruuca Gaadiidka ahi aanu ka fikirin marinka qulqulka ee 2030 saadaasha oo aan helin wax suurtagal ah, kama dhigi karno qorshaha mashiinka gaadiidka ee loogu talagalay wadnaha qofka. Ku rid koorsada sayniska ee, si farxad leh u qaadato, waanu difaacnaa. Waxaan aaminsanahay sababaha iyo sayniska. Ku guuldareysiga in lagu daro Qorshaha Mashruuca Gaadiidka wuxuu xoojinayaa qorshahan si uu u noqdo dukumenti cilmi ah. Mawqifkayagu waa inaan taageerno maalgashiga dadweynaha ee dawladda dhexe. Ma fiicna inaad isku dardarto labadaba. Waxaa loo sameeyey ujeedooyin kala duwan oo ah in aan ku lug laheyn
Ma dhaqmi doono dadweynaha
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Aziz Kocaoglu, siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga iyo hannaanka ay ku nool yihiin dhaqaale aad u daran ayaa sidoo kale tilmaamay in kor u kaceen sanadihii la soo dhaafay ay sabab u tahay qiimaha credit. Isagoo carrabka ku adkeynaya in degmada Metropolitan ay hirgelisay maalgelin sida metro oo leh deymaha laga helay suuqyada caalamiga ah iyada oo ay ugu wacan tahay kalsoonida sare, Duqa Magaalada Kocaoğlu wuxuu yiri, Tani waa qayb ka mid ah siyaasadaha dhexe ee na taabanaya. Magaalada Boosaaso ayaa hadda ah midka shanaad ee waxa bulshada caalamku ay ku magacawdo 'debable'. Laakiin si loo raadsado siyaasad dhaqaale oo joogto ah, waxaan leenahay dhibaatada sugitaanka deynta si aan caadi ahayn iyo dulsaarka amaahda deyntu inay dhacdo. Sababtoo ah qiimahaasi waa xad-dhaaf. Haddii aan noqon doono populist, ma aanan sameynin 14 sanado, waxaan ku iibsan doonaa qiimo sare. Hase yeeshee, munaasabadan, ma doonayo in aan ku bixiyo kharashka amaahda. Sababtan awgeed, tareenka Buca ayaa si tartiib ah u socon doona illaa xaddi xaddiga dulsaarka dulsaarka ee caadiga ah. Anigu waxaan u sheegaa dhamaantahayga ".
Bankiyada Iller Bank ee deynta jaban
Duqa magaalada Aziz Kocooglu, 180-200 million euros, oo lagu qorsheynayo in uu ku baxo qorshaha amaahda amaahda ee Nargis ee hay'ad maaliyadeed oo xaalado aad u wanaagsan leh awgeed, sababtoo ah dabeecadda Iller Bank ayaa sheegtay inaysan qiimeyn karin. Madaxweynaha Kocaoğlu wuxuu sheegay in dulsaarku yahay 1.34 sida soo jeedinta loo soo gudbiyay waqtigaas:
Protokol Waxay samaysteen nidaam ay bixiyaan Bankiga Iller. Waxaan codsanay Bankiga Degmooyinka. 110 million deynta euros. Waxaan u qoray, waxaan u tagay Maareeyaha Guud ee Bankiga Iller. Waxaan u tagnay wasiirka uu la shaqeynayay. Waxaan ka codsanay Ra'iisul Wasaaraha ballan. Tan iyo maalmihii ugu danbeeyay ee Ramadaanka waan xasuustaa, waxaan dib u cusboonaysiineynaa codsigeena si aan ula xaajoodno Ra'iisul Wasaaraha. Kadibna waxaan la kulmay Maareeyaha Guud ee Bankiga Iller. Waxa uu sheegay in ay u isticmaali doonaan deyntan isbeddelka magaalada. Maalintii xigtay waxaan ballan ka qabannay hay'adda amaahda. Waxay yiraahdeen 'deynta lama isticmaali karo isbeddelka magaalooyinka'. Maanta ma xiisaha credit a dalka Turkiga sida. Hadda dalabyada waxay ku socdaan heerka 4-4,5. "
1 ma helin taageero lacageed
Duqa magaalada Kocaoğlu wuxuu sheegay inuusan wax taageero ah ka helin maamulka dhexe ee 1 Kuruş mashruuc kasta oo aan ahayn dakhliga ka soo ururiyay canshuurta dadka ku nool magaalada waana in la siiyaa sida waafaqsan sharciga, Koca Let alone taageero waa taageero bilaash ah oo deynta ah. Xaqiijinta kaliya ayaa la bixin doonaa. In kasta oo aan ku nool nahay magaalooyinka kale iyo hababka tareenada ee dawlada dhexe, waxaan dooneynay inaan la wadaagno saaxiibadayda munaasabaddan, xitaa markii aynu ku dubannay shidaalkeena iyo kordhinta nidaamka tareenada 11 ee xNUMX km. Waad ogtahay inaanan rabin inaan ka hadlo wax badan, waxaan diirada saarayaa. Laakiin waqti ka dib waxaan u maleynayaa inay tahay mid waxtar leh oo la wadaagayo arrimaha qaarkood. "
Yaa ka faa'iideysanaya in aan kor loogu qaadin kartida Isban?
Mayor of Izmir Metropolitan Mayor Aziz Kocaoglu, Izban ee kor u qaadista qorshaha awoodda rakaabka ayaa la dhaqan gelin doonaa tan iyo nidaamka TCCD 2005, ayuu yiri. Aragtida ay taageerto Binali Yıldırım iyo Maareeyaha Guud ee TCDD Süleyman Karaman, oo ah Wasiirka Gaadiidka, ayaa sheegay in tareenada xamuulka ah ay galaan habeenkii oo kaliya iyo rakaabka ka imaanaya waqooyiga waa in lagu daraa nidaamka Menemen iyo kuwa ka soo socda koonfurta ayaa lagu darey nidaamka Torbali.
"Ma jiro wax calaamad u ah line-ka. Calaamadeynta waxay u baahan tahay in la cusbooneysiiyo si loo sameeyo duulimaadyada inta badan. Arrintani waxay ahayd hawsha TCDD tan iyo markii 2005, halkaas oo qandaraaskii la sameeyay, laakin xittaa looma baahna. Cabashada ugu badan ee aan maanta leenahay waa ciribtirka Izban. Yaa ka faa'iideysanaya in aan labanlaabin tirada rakaabka ee khadadkan qumman ee isku xira waqooyiga ilaa koonfurta? 8-10 Sanadkan ma fahmin. Dufanka, baruurta, sonkorta dhammaantood waa diyaar. Waxaan dhigi doonaa halva. Had iyo goor ajendaheena. 8 ee 4 xubin guddi naga timaado, 4 wuxuu ka socdaa TCDD. Guddoomiyaha Guddiga waa mid ka mid ah iyaga iyo midkeenba. Mashruucan waxaa loo sameeyey by the Republic of Turkey taariikhda mashruuca tijaabada la ah hay'adaha dawladda dawladda hoose ee. Abaalmarinta adduunka. Anigu ma fahmin cidda aan ka faa'iideysan karin awooddan. "
Faahfaahinta farsamooyinka Qorshaha Mashruuca Gaadiidka ee İzmir ayaa waxaa sameeyay Kader Sertpoyraz, Madaxa Waaxda Gaadiidka ee Magaalada Metropolitan iyo Mert Yaygel, Madaxa Waaxda Gaadiidka Gaadiidka. Prof. Dr Haluk Gerçek iyo Prof. Dr. Serhan Tanyel wuxuu xoojiyay muhiimadda daraasaddan sayniska.
Habka ka qaybqaadashada
Nidaamka diyaarinta ee Qorshaha Gaadiidka Gaadiidka ah ee İzmir ayaa la qaaday habab u hoggaansan heerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah. Daraasad dhamaystiran oo gaadiidka ah ayaa loo qaaday si loo helo xog aan weli la horumarin. Daneeyayaasha sida wakiilada bulshada rayidka ah iyo qolalka xirfadlayaasha ayaa ka qaybgalay heer kasta oo daraasaddan. Iyadoo lagu saleynayo dhibaatooyinka la ogaaday, labada qorshe ee horay u jiray iyo go'aamadii Qorshaha Master Plan ee 2009 ee hadda jira ayaa dib loo qiimeeyay. Intaa waxaa dheer, dhacdooyin cusub iyo soo jeedinno cusub ayaa la sameeyey iyada oo la tixgelinayo maalgashiyada kale ee qaranka. Talooyinkan waxaa lagu qiimeeyay 10 siminaarro kala duwan iyo 16 duwan oo loo sameeyay horumar. Muuqaaladaan waxaa loo yareeyay xaalada 4 iyo natiijooyinka waxaa loo soo bandhigay ururrada aan dawliga ahayn iyo daneeyayaasha kale. Qorshayaasha waxaa abuuray xulasho kala duwan.
Sahaminta 40 waxaa lagu qabtey in ka badan 1,000 qoys oo leh qiyaasta kun qof, iyo sidoo kale 100 kun oo darawal, rakaab iyo dad lugeynaya.
Gaadiidka wuxuu ka tirsanyahay 135 isdhexgalka iyo xiga 114, daraasad xawaaraha khaaska ah ee darawalnimada ee 6, iyo daraasad xawaareyn xawaalad ku socota 15.
Kooxda cilmi baarista ee 327, shaqaalaha maamulka ee 20 iyo qaybaha la xiriira gaadiidka ee degmada Metropolitan ayaa ka qaybqaatay daraasadda.
Wareegtada qorshaha Mashruuca ee Gaadiidka Gaadiidka ee İzmir, shirarka daneeya ee 200 waxaa la qabtay hay'adaha 4 iyo ururada.
Qorshaha Mashruuca Gaadiidka Gaadiidka ee Izmir
Waxay yareyneysaa ku tiirsanaanta baabuurta
Wuxuu dhiirigeliyaa gaadiidka aan mootada lahayn isagoo taageeraya baaskiiladaha iyo gaadiidka lugta,
Diirad gelinta gaadiidka dadweynaha,
Soo jeedinta nidaamka gaadiidka dadweynaha,
Tixgelinta saameynta deegaanka,
Bartilmaameedka Caafimaadka iyo Amniga Bulshada,
Taageeridda kobcinta dhaqaalaha, daryeelida kooxo aan faa'iido lahayn,
Qorshe ka-qaybqaadasho iyo hufan ayaa la abuuray.
Ka dib marka macluumaadka la siiyo xubnaha golaha ee nidaamka xiga, qorshaha waxaa loo gudbin doonaa Agaasimaha Guud ee Maal-gashiga Kaabayaasha (AYGM) ee Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta. Waxaa markaa loo soo bandhigi doonaa Baarlamaanka iyo Golaha Guud ee UK si loo ansixiyo.
Muxuu qorshuhu saadaalinayaa?
Qorshaha Mashruuca Gaadiidka, kaas oo ujeedkiisu yahay in magaalada la diyaariyo sanadka 2030, wuxuu dejiyaa dhibaatooyinka iyo qiyaasaha ay ku wajahan tahay gaadiidka 2030. Dadka magaalada ayaa la rajeynayaa in ay yihiin 2030 milyan oo 6.2 ka dib markii lagu qiyaaso xisaabinta qiyaasta qorshooyinka degaanka. Xaddiga dalabka safarka ee laga soo saaro dadkan waxaa lagu xisaabiyaa 10 million. Tani waxay la mid tahay, isbeddelka ugu muhiimsan waxaa lagu arki doonaa tirada baabuurta iyo lahaanshaha gawaarida, maantana tirooyinka baabuurta ee magaalada, oo ku dhow 642 kun, waxay noqon doonaan 1.4 million sanadka la beegsanayo. Heerka kordhinta tirada baabuurta, sidaas darteed, wuxuu ka badan yahay heerka koritaanka dadweynaha.
Dhibaatooyinka guud iyo halista guud ee magaalada;
Kordhinta tirada baabuurta,
Tani, isbeddelka dalabka ee gaadiidka leh gaadiidka gaarka ah ee gaadiidka gaadiidka gaarka loo leeyahay,
Kobcin la'aanta shabakada wadada iyo ciriiriga ku jira halbowlayaasha ugu muhiimsan 47 boqolkiiba,
Kobcinta qaaska ah oo keli ah oo sidaas darteed kor u qaada celceliska masaafada safarka iyo muddooyinka,
Socodka baaskiilada iyo safarrada lugta leh ee aan lahayn gaadiidka baabuurta,
Warshadaha ku yaalla bartamaha bartamaha iyo wixii la mid ah. hawlaha waxaa lagu bedelaa xarumo ganacsi oo sidaas darteed bedelida safarka safarka ee xarunta.
Waa kuwan Hadafyada 2030:
Qorshaha Mashruuca Gaadiidka Gaadiidka waxaa lagu aasaasay habkan, waxaa la qorsheynayaa in la abuuro nidaam tareenka xNUMX km isagoo ku daraya 15 km oo ku yaala shabakada 153 km ee sanadka 312 ee xiga. Nidaamka hirgelinta dhismaha hadda ee Narlıdere iyo dhismaha dhismaha ayaa dhowaan la qaban doonaa, Buca-Üçyol line isla markiiba ka dib mashruuca Sarnic-Gaziemir-Eskiismir-Cankaya-Basmane-Yenişehir iyo khadka Buca oo ka socda mashruuca Ucuol Konak-Alsancak-Halkapınar-Bayrakli waxaa lagu darayaa barnaamijka miisaaniyadda mudnaanta leh.
Lafaha ugu muhiimsan ee shabakadani waa fiditaanka IZBAN ee Bergama ee woqooyiga iyo Tire, Ödemiş, Bayındır ee koonfurta.
Si kastaba ha noqotee, si loo daboolo baahida mustaqbalka, kala soocida IZBAN iyo shirkadaha qadka tooska ah ee khadka hadda iyo awoodda IZBAN in ay ka shaqeeyaan iyadoon la dagaallamayn nidaamyada kale waxaa loo arkaa inay tahay baahi lama huraan ah oo ku wajahan İzmir. IZBAN waxay awood u leedahay in ay raacaan rakaabka 10-10 kun saacaddiiba iyada oo la adeegsanayo xaddiga saacadaha 13 haddii ay dhacdo kala qaybsanaanta khadka loo adeegsado IZBAN waxaana la filayaa in 3 kun oo rakaab ah saacad kasta in la sameeyo iyadoo la sameynayo safar hal saac ah.
Taas ka dib, waxaa loogu talagalay in lagu bilaabo kordhinta Ciigli-AOSB iyo Jaamacadda Katip Jelebi iyada oo la dhamaystirayo isku xirka Mavişehir ilaa Tarya Tramway ee shabakadda nidaamka tareenka muddada gaaban. Waxaa loogu talagalay in la bilaabo dhismaha xariiqa mitrooga ee hadda jira ee kordhinta Narlıdere ee galbeedka iyo kordhinta Evka3-Bornova ee bariga. Maalgashi kale oo muhiim ah muddada gaaban ayaa noqon doona tan cusub ee Buca-Uçyol ee la ansixiyay.
Waqtiga xaadirka ah, waxaa la qorsheeyay in lagu kordhiyo khadka Buca oo ku yaal wadooyinka Alsancak-Halkapınar iyo Bayrakli dhanka bartamaha magaalada. Iyadoo la kordhinayo ku dhowaad 10.7 km, khadka Buca wuxuu gaari doonaa bartamaha magaalada iyo aag ganacsi oo cusub. Waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo khadka xidhiidhka IZBAN ee koonfurta. Khadad kale oo muhiim ah waa lineka Eskiism oo ka bilaabma Sariirta iyo kuyaalada Gaziemir, Eskiismir, Esrefpasa, Cankaya, Basmane, Yenisehir iyo Halkapinar. Khadka 27.6 km wuxuu isku xirayaa meelaha ugu muhiimsan ee degaanka iyo goobaha shaqada.
Ka imanaya dariiqa Bornova-Bayraklı Karşıyaka iyo khadka woqooyi, oo sii gudba woqooyi ee Çiğli isla markaana la dhex galaya khadadka jira ee Jaamacadda Katip Çelebi, ayaa la qorsheeyay si loo buuxiyo baahiyahaas.
Xarunta Halkapınar-Bus Station, oo lagu qorsheynayo dhismaha Wasaaradda Gaadiidka, ayaa sidoo kale lagu daray qorshaha, waxaana lagu sheegay in khadkaas loo kordhin doono Pınarbaşı.
Qorshayaasha muddada dheer waxaa ka mid ah kordhinta line-upka Bornova-Narlıdere ee quruxda badan ee qurxinta. Waqooyiga, waqooyiga ayaa la filayaa in lagu kordhiyo Menemen. Horumarintan waxaa la filayaa in ay aad u culus tahay marka loo fiiriyo dadweynaha gobalkaan waxaa la siiyaa muhiimad gaar ah oo ku saabsan kordhinta.
Bariga, khadka Pınarbaşı waxaa loogu talagalay in lagu ballaariyo Kemalpaşa OIZ iyo xarunta Kemalpaşa.
Karşıyaka taraam cusub waxaa la qorsheeyay bartamaha waddada Kyrenia. Muddadan, waxaa loogu talagalay in lagu daro wadarta guud ee xariiqyada 56 km iyo in la kordhiyo qadka nidaamka tareenka illaa 2030 km ee 465.
Dhibaatooyinka nidaamka tareenada qorshaysan ee gaaban, dhexdhexaad ah iyo kuwa muddada fogba waa sida soo socota:
* Karşıyaka Dheeraadka ramiensionli ee taraam
Xarumaha 11,0km / 14
* Kordhinta guriga Evka3-F.Altay Metro Line to Bornova-Narlıdere (1 & 2.Etap)
Xarumaha 8,1km / 8
* Buca Subway (1 marxaladda)
Xarumaha 13,5km / 11
* Wareegga cusub ee loo yaqaan 'Izban-Ödemiş-Tire'
Xarunta 75,2 km / 19
* Kordhinta Izban-Pergamon
Xarunta 54 km / 15
* Buca Subway 2. iyo 3. marxaladaha
Xarunta 12,3 km / 12
* Eskiizmir Metro line
Xarunta 27,6 km / 24
* Wadada North Metro
Xarunta 21,6 km / 21
* Khadka Halkapınar-Kemalpaşa Khadka Jirka (1)
Xarunta 8,9 km / 10
* Evka3-F.Altay metro line Beautifulbahçe kordhinta
Xarunta 13,6 km / 11
* Tareenka Waqooyi ee Waqooyiga (mareynka xeyn 2 marxaladda)
Xarunta 14,2 km / 13
* Halkapınar-Kemalpaşa metro (marxaladaha 2 iyo 3)
Xarunta 23,7 km / 13
* Girne Tramway
Xarunta 4,4 km / 10
Qorshaha Mashruuca ee Gaadiidka Dhismaha ee İzmir, xarumaha wareejinta waxaa loo tixgeliyey inay yihiin qaybta ugu muhiimsan ee shabakadda nidaamka tareenka. isagoo network ugu awoodda badan isku dhafan gaadiidka dadweynaha ee xarumaha kala iibsiga Turkey Izmir ee gaarka ah ee dib uqaabaynta aragti cusub, oo leh hab naqshadda qurux xalin oo dhan baahida kaabayaasha farsamo ayaa la siiyey. Marka laga soo tago xarunta 24 ee hadda jirta iyo dhibic, xarun cusub oo lagu wareejiyey ayaa lagu qorsheeyey dhibicda 27. Si loo yareeyo isticmaalka gaadiidka gaarka loo leeyahay iyo kor u qaado gaadiidka dadweynaha, 52 "park-go" ayaa la dhisi doonaa.
6 cusub cusub, 11 line cusub
Marka la eego aqoonsiga magaalada dekedda leh ee İzmir, 6 cusub iyo 11 qorshe cusub oo cusub ayaa la samayn doonaa si loo hagaajiyo gaadiidka badda. Sidaa awgeed, tirada iskudhafku waxay kor u qaadi doontaa 17 iyo tirada xariiqyada 10 waxay kordhin doontaa 21.
Baaxadda gaadiidka aan mootada ahayn oo ah habka ugu muhiimsan ee qorshaha, wadooyinka cusub ee baaskiilka ayaa la qorsheeyay waxaana la sameeyey goobo cusub oo lugta lagu socdo.
Wadar ahaan, wadada 350 km wareegsan ayaa la qorsheeyey oo xadiiqadda 670 ha ayaa loo qoondeeyey inay lugaynto.
Xaddiga 110, oo loo samayn karo taabasho yar oo ku jirta gaadiidka magaalooyinka, ayaa dib loo habeeyay. Iyadoo la raacayo kuwan, qiyaastii 200 km wadada xawaaraha sare ayaa loo beddelay codsi dhexdhexaad ah iyo mudo dheer.
Hoos u dhigidda 18 ee kaarboonka
Waxaa loola jeedaa in dhammaan la shaqeeyaa magaalada oo dhan la leh İzmirimkart iyo in ay isku xiraan habab dhameystiran.
Iyadoo la tixgelinayo faa'iidooyinka qorshaha ee dhexdhexaadinta iyo muddada dheer ee qaabeynta dhammaan bartilmaameedyada, hoos u dhaca isticmaalka gawaarida gaarka loo leeyahay ee u dhow xarumaha 4 ayaa la soo jeediyey. Waxaa la qorsheynayaa in isticmaalka nidaamka tareenka uu kordhin doono dabaqa 2. Xaaladdan, hoos udhaca 2 ee saldhigga CO2030 ee saacadda ugu sarreysa ee subaxdii ayaa loogu talagalay 18 hoos u dhigis.
Waddooyinka Waddada Baabuurta Waddooyinka Sida Waddooyinka Gaadiidka Gaadiidka ee Baasaboorka - 2030 (War Saxaafadeed)
Qorshaha Gadiidka 2030 ee Izmir ayaa laga wada hadlay
2030 Muuqaalka Gaadiidka ee Gaadiidka Dadweynaha
Qorshaha Mashruuca Gaadiidka ee Bursa (Video)
Qorshaha Master Plan ee Kocaeli ayaa ku dhawaaqay
Antalya uma baahnid nidaamka tareenka illaa 2030
Bartilmaameedka 2030 ee gaaska dabaysha
Mashruuca Transit Gulf
Ogeysiiska Qandaraaska: Soo iibso dharka
Shirkadda 15 waxay ku tartameysaa Narsandere Metro